Ballerinas, kabo raaxo leh oo lagu degdego maalmaha qoraxda | Bezzia
Maria vazquez | 11/10/2021 18:00 | Maxaan xirtaa, zapatos
Qoob -ka -ciyaarayaashu waa mid beddel weyn oo ah nus saac si aan u dhammaystirno dharkayaga. Sida mokcasins -ka, oo aan dhawaan ka hadalnay, kabahaan fidsan waxay na siiyaan raaxo weyn maalin walba.
Inta lagu jiro maalmaha qorraxda waxaan wali ku xiran karnaa qoob -ka -ciyaarayaasheena cago qaawan. In kastoo, ka hor inta aan laga saarin armaajo, ay caadi noo noqon doonto inaan ku isticmaalno sharabaaddo dhuuban. Iyo in la dhammaystiro dhammaan noocyada dharka, leh jiinis daabacan, dhar ama goonno.
Qoob -ka -ciyaarayaashu waa a kabo fudud oo raaxo leh. Ugu yaraan inta badan, marka laga reebo moodooyinka aan lahayn cidhib hoose. Kuwani maaha kuwa lagu taliyay in lagu socdo masaafo dheer, in kasta oo la mid ah ayaa laga sheegay flip-flops oo waxaa jira kuwa la socon kara adduunka oo dhan. Laakiin yeynaan ka leexan.
Midabyo dhexdhexaad ah oo qaawan, qoob -ka -ciyaarayaashu waxay noqdaan xulafooyin isku dhafan si ay u dhammaystiraan dharkayaga. Waan jecelnahay iyaga leh jiinis iyo jaakad dhaadheer ama roobab, isku-darka waddada ka baxsan oo shaqayn kara 24 saacadood maalintii. Waxa kale oo aad dooran kartaa shaati la tolay iyo kaadhka, oo aad ugu habboon xilligan oo kale.
Haddii uu jiro qof garanaya sida looga faa'iidaysto isku -darkaan si fiican, waa Anouk Yve, kuwaas oo labiskooda aad ku xanuunsan doonto inaad ku aragto Bezzia. Waxaad ku heshiin kartaa in ka badan ama ka yar dhadhankeeda iyada laakiin iyadu waa il weyn oo waxyi marka ay timaado abuuraan dhar aasaasi ah maalinteena maalinba.
Waxaad sidoo kale isku dari kartaa qoob -ka -ciyaarayayaasha dharka iyo goonnada qaabaysan, si loo gaaro qaab leh hawo jaceyl oo kale ah Van y Maria Ruiz. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya blazer ama cardigan midabyo dhexdhexaad ah si aad u dhammaystirto muuqaalkaaga. Ma waxaad raadinaysaa wax rasmi ah oo khatar badan? Jenny walton leeyahay furaha. Ku dhiiran goonnida leh midab midab leh oo ku dar ballerinasyada iska soo horjeedda, ma ogaan doontid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Ballerinas, kabo raaxo leh oo lagu degdego maalmaha qoraxda